Tony Fadell, mpamorona ny iPod, dia mamela an'i Nest (Google) | Avy amin'ny mac aho
Tony Fadell, mpamorona ny iPod, mamela an'i Nest (Google)
Isaky ny mahazo orinasa kely ny orinasa lehibe iray dia matetika no lazaina fa ny zavatra rehetra hitohy hiasa toy ny teo aloha io, fa tsy misy lavitra ny marina. Ny zavatra voalohany mitranga matetika aorian'ny fahazoana dia ny fangatahana na ny vokatra avy amin'ilay orinasa kely kokoa dia manjavona amin'ny tsena ary lasa anisan'ny orinasa mpividy. Ny lohan'ny orinasa kely dia esorina na apetraka amin'ny toerana hafa ao anatin'ny orinasa lehibe kokoa. Amin'izany dia afaka mahita ohatra maro isika tato anatin'ny taona vitsivitsy ary Tony Fadell dia iray hafa manatevin-daharana ny lisitra.
Tony Fadell dia nandao ny orinasa monina any Cupertino hanomboka ny orinasany manokana ary handefa termostat marani-tsaina antsoina hoe Nest. Nandritra ny taona maro, ireo karazana fitaovana ireo dia nanjary resabe tao an-tsena, hany ka lasa liana tamin'ny orinasa Google ary nividy azy. Saingy nanomboka teo dia nahemotra fotsiny ny fandefasana fitaovana vaovao ary toa tsy te-hanohy ny tantara toy izao ny Abidia, noho izany dia nanome ny endrik'ilay mpanorina azy, Tony Fadell, ary nametraka ho lohan'ny orinasa ho Marwan Fawaz, filoha lefitra teo aloha tao Motorola mandra-pivarotany tamin'ny sinoa Lenovo.
Toa manondro izany daholo Ity hetsika ity dia mikendry ny hanombohana haingana araka izay tratra ny karazana thermostat sy ny fitaovana vaovao izay niasan'ny orinasa tao anatin'izay taona lasa izay mba tsy hilaozan'izy ireo izao fa izao dia izao IoT dia malaza eo amin'ny mpampiasa rehetra, na dia amin'izao fotoana izao aza dia mbola tsy azon'ny mpampiasa maro ny vidin'ity karazana fitaovana ity. 50 euro miaraka amina adaptatera ahafahantsika mampirehitra jiro avy lavitra amin'ny iPhone, dia toa hadalana tanteraka izany amiko ankehitriny. Raha te hametraka fitaovana iray karazana toy izao isika isaky ny jiro ao an-trano dia mila mandany karama iray manontolo isika vao afaka manao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tony Fadell, mpamorona ny iPod, mamela an'i Nest (Google)
Inona no antenaintsika amin'ny WWDC momba ny OS X 10.12?
Apple dia manome voninahitra ho fahatsiarovana ny fiainan'i Muhammad Ali